Bhaibheri rinotii kuti tinofanira peta maoko ako uye maziso ako patinonyengetera?
Kana ndiyo inonyanya nzira kuti isu kubvunza unbiblical?
Apo Jesu anotaura pamusoro muteresi saka akasimudza meso ake haana kudenga paakabvunza Mwari kuti tsitsi uye tsitsi. Nei Jesu zvizere? Nokuti inoshandiswa kunyengetera yakazaruka maziso akatendeukira kudenga!
Ngatitaurei simbisai pakarepo:
Hapana muenzaniso muBhaibheri kuti akanyengetera akapeta maoko, kana hapana muenzaniso kuti vakavhara meso avo mumunyengetero! Saka Wabvepiko kuti unofanira snap maoko avo uye maziso ako paunonyengetera? Hongu, hazvina kubva muBhaibheri!
With yakazaruka maziso
Jesu akaita sei muBhaibheri?
John 11:41. Zvino vakabvisa ibwe kubva kunzvimbo akafa murume akarara. Zvino Jesu paakasimudza maziso ake , akati: Baba, ndinokuvongai nokuti mandinzwa.
Apo Jesu akatenda Baba vake, Iye akasimudza anopenya. Akanyengetera pamwe yakazaruka maziso!
Pane zvakawanda muenzaniso mumwe eEvhangeri yaJohani nezvaJesu bönesätt:
John 17: 1st Ipapo Jesu akataura, uye meso ake kudenga , akati: Baba, nguva yasvika. Kudzai Mwanakomana wenyu, kuti Mwanakomana wenyu nemiwo akukudzei;
Jesu akatarira kudenga paainyengetera. Saka tinoona zvakajeka kuti zvebhaibheri kunyengetera nameso avo akavhurika! Saka wadii kuedza kunyengetera pamusoro zvebhaibheri nzira? Nguva inotevera pamunonyengetera, svinurai meso enyu kudenga! Nyengetera munzira naJesu!
Jesu aigara meso ake kudenga, saizvozvo zvingwa:
Mateu 14:19. Akabva arayira kuti vanhu vagare pasi pauswa. Zvino akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri, uye achitarira kudenga , akavonga, akamedura zvingwa, akapa kuvadzidzi, uye vadzidzi vakapa vanhu.
Ngationei mumwe muenzaniso.
Luke 18:13. Asi muteresi amire kure kure uye asingadi kunyange kutarira kudenga, asi akazvirova chipfuva akati, 'Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi.
1 Tim 2: worusere saka ndinoda varume kwose kwose vanofanira kunyengetera uye maoko matsvene, vasina kutsamwa uye mubvunzo.
Paul vanoda kunyengetera wakasimudzira maoko. Anoti hapana pamusoro vakabata. Chikonzero ichi ndechokuti vanligate nzira kuzomunamatira ane maoko. Asi apo anoita tsika kuti munhu snap maoko avo? Kwete, zviri muBhaibheri ose nyaya.
Kana iwe maoko avo kuna Mwari anovhura kusvikira iye nenzira yakasiyana kana vaizofanira maoko avo akapeta, akapeta kana nemaoko ari muhomwe yake.
Edza iwe uye uchaona kuti ndezvipi zvinoita sokuti.
Cherechedzai kuti vaizogara mawoko avo kana vakanyengetera. "... namatai uye maoko matsvene ..." Uyezve, kucherechedza kuti vaizoita kudaro kwese . Naizvozvo kwakanga zvakajairika bönesätt.
Izvi pamwe maoko haisi yakagadzirwa mutsva Paul. Panoti nezvazvo muTestamende Yekare.
1 Madzimambo 8:54: ". Apo Soromoni apedza mashoko aya, muchinyengetera vanodana Ishe, akasimuka kubva paaritari yaJehovha, apo akanga namabvi ake, maoko ake uchasimudzirwa kudenga"
Pisarema 63: 4: "Ndichakurumbidzai chero hwangu muzita renyu ndichaita maoko angu."
Pisarema 141: 2: "Munyengetero wangu seanoshanda pamberi penyu sezvinoita zvinonhuhwira, vachisimudza maoko angu sezvo chamadekwana."
Mariro 3:41: "! Ngatisimudzei yedu uye maoko edu kuna Mwari ari kudenga"
Last bhaibheri mazwi, tinoona kuti upenyu achava mwoyo yedu aripo apo isu maoko edu kuna Mwari.
The Bible anotidzidzisa, ipapo tinogona maoko edu uye maziso kuna Mwari patinonyengetera kwaari. Ndiyo nzira zvebhaibheri.
Vecka 49, tisdag 7 december 2021 kl. 15:56